စိတ်၏စေရာ....: Photoshop Cs5အသုံးပြုနည်း ( E-Book )
ကျွန်တော်တို့ လူငယ် ပရဟိတ ကူညီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ သို့ပါဝင် လှူဒါန်းချင်သူများ အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်များကို ဆက်သွယ် လှူတန်းနိုင်ပါသည်...
အောင်ကျော်သူ - 09-420042280 ကိုဇင် - 09-420056843
ကျော်ဘိုဘိုလင်း -09-5133853 ဘိုဘိုဘုန်းမြင့် -09-420176465
အောင်လေး -09-450032930 ဥက္ကာအောင် -09-450053512
ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့သွားရောက်လှူဒါန်းရာတွင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ကုသိုလ်ပါဝင်ချင်သော အလှူရှင်များအနေဖြင့် သွားရောက်လှူဒါန်းမည့်ရက်မတိုင်ခင်(၁)ပတ် နောက်ဆုံးထား၍ အကြောင်းကြားစေချင်ပါသည်...
ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှ လှူဒါန်းမှုများကို (၄)လ (၁)ခါပြုလုပ်သွားရန် စီစဉ်ထားပါသည်။ အမှန်တကယ် ဆင်းရဲချို့တဲ့ သောနေရာများကို ရှာဖွေ၍ လှူဒါန်းမည်ဖြစ်သည်။ ကြီးမားသော အလှူများပြုလုပ်နိုင်ရန် အတွက် Member ၀င်များလဲ အလိုရှိပါသည်...အိမ်တိုင်ရာရောက် အလှူငွေဖြတ်ပိုင်းဖြတ်ပေးပါမည်...
လူငယ် ပရဟိတ ကူညီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ ၏ အလှူအတန်းပုံရိပ်များ
ကျွန်တော်တို့ group လေးကို (၃၀.၁၁.၂၀၁၂ (သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့)) က စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
“လူငယ် ပရဟိတ ကူညီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့” ၏ ပထမအကြိမ် လှူဒါန်းမှုအနေဖြင့် (ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ပေါ်ဦး (၆)လမ်း) ၌တည်ရှိသော “သာသနာ့စရာ့ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်” တွင် တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့ (၂၈.၁၁.၂၀၁၂) ကပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အဖွဲ့ဝင်များမှ စုပေါင်းကာ “ကထိန်လျာမြတ်သင်္ကန်း” နှင့် လှူဖွယ် ၀တ္ထုအစုစုကို ကျောင်းတိုက် ပဓာန နာယက ဆရာတော် “ဘဒ္ဒန္တ-၀ိစိက္က” အားကပ်လှူခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းတိုက်တော်ကြီး ဆောက်လုပ်ရန်အတွက်အလှူတော်ငွေ (၆၀၀၀၀) ကျပ်အားဆက်ကပ်ခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် ကျောင်းတိုက်သို့ ကထိန်လျာသင်္ကန်း လာရောက်ဆက်ကပ်ကြသော လူပုဂ္ဂိုလ် ဧည့်ပရိသတ် များအား အအေး၊ အချိုရည်များတိုက်ကျွေးလှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
နောက်ထပ်မံကာလှူဒါန်းမည့် အစီအစဉ်များလည်းရှိပါသေးသည်။ ဒုတိယ လှူဒါန်းမှုအနေဖြင့်....“ဆည်းဆာရိပ်ဘိုးဘွားဂီလာနရိပ်သာ” (၈၀၃/၈၀၅၊ မဟော်သဓာလမ်း၊ (၁၂) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း၊ ရန်ကုန်မြို့။)
ဥက္ကဌ-Dr.သန်းမြင့်အောင် (ph-09-5078418) ကိုလှူဒါန်းရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်...
ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့သာမက တခြားအဖွဲ့ များလည်းသွားရောက် လှူဒါန်း နိုင်ရန် လိပ်စာနှင့်တကွ ဖုန်းနံပါတ်ပါ ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်...
ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ လူမျိုးများအနေဖြင့် “အလှူရေစက်လက်နှင့်မခွာ” ဆိုသလို လှူတန်းနိုင်ကြပါစေ...
“ဆည်းဆာရိပ်” ဂိလာနဘိုးဘွားများ ရိပ်သာ
“မွေးဖွားခြင်းသည် သေခြင်းတရားဆီသို့ ဦးတည်နေသောခရီးလမ်း၏ အစ” ဟူသော လူ့လောကသဘာဝတွင် အို၊ နာ၊ သေရေး နှင့် မလွဲသွေ ရင်ဆိုင်ကြရမည်မှာ အမှန်တရားပင် ဖြစ်ပေသည်။
ထိုရှောင်လွှဲ၍ မရသော အကြောင်းတရားများနှင့် ရင်ဆိုင်နေကြရသူများတွင် ကုသိုလ်ကံ ကောင်းသူများအဖို့ ၎င်းတို့၏ ဘ၀နေ၀င်ချိန်ထိ မပူမပင် အေးချမ်းစွာ နေထိုင်သွားနိုင်ကြသော်လည်း ကုသိုလ်ကံ မကောင်းသည့် မိအို၊ ဖအို များမှာမူ ဘ၀နေ၀င်ချိန် မရောက်ခင်အကြား ဘ၀ကို ပင်ပန်းဆင်းရဲကြီးစွာ ဖြတ်ကျော်နေကြရရှာပါသည်။
အကျိုးပေးကံကောင်းသည့် ဘိုးဘွားများအဖို့ သား၊သမီး၊ မြေးများနှင့် ပျော်ရွှင်နေချိန်တွင် ကံအကျိုးပေးနည်းလှသည့် ဘိုးဘွားများမှာ ပြုစုစောင့်ရှောက်မည့်သူများ မရှိ၍သော်လည်းကောင်း၊ ဘိုးဘွးများအပေါ် မနှစ်မြို့ သဖြင့် ငြူစူမှုမျိုးစုံအောက်တွင် သိမ်ငယ်စွာ ခံစား နေထိုင်ကြရကာ ဒုက္ခမျိုးစုံနှင့် ရင်ဆိုင်နေကြရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကြင်နာစွာ စောင့်ရှောက်မည့်သူ ကင်းမဲ့နေသော ဘိုးဘွားများအတွက် မိသားစုသဖွယ် နွေးထွေးစွာ စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်သော သီးသန့် ရိပ်သာလေးတစ်ခု လိုအပ်လာပါသည်။
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ခိုကိုးရာမဲ့နေကြသော ဂိလာန ဘိုးဘွားများအား ကြင်နာစွာဖြင့် ၎င်းတို့ အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်သမျှ ကာလအပိုင်းအခြားအထိ ၎င်းတို့အပေါ်တွင် နားလည်စာနာစိတ်၊ သည်းခံစိတ်ဖြင့် ပြုစုယုယပေးမည့် နွေးထွေးသော မေတ္တာများဖြင့် ဖေးမကူညီနိုင်ကြစေရန် မ,တည်ငွေဖြင့် “ဆည်းဆာရိပ်” ဂိလာန ဘိုးဘွားများ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ကြပါသည်။ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲစေရန်အတွက် အများပြည်သူစေတနာရှင်များ၏ အကူအညီများ လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ဘိုးဘွားများအား နွေးထွေးသောလက်များဖြင့် ဖေးမကူညီကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ ပန်ကြားအပ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ Photoshop ကိုတော့ အားလုံးလိုလို စိတ်ပါဝင်စား ရှိကြပါတယ် .. တစ်ချို့ကလည်း လုပ်ငန်း ပိုင်းအတွက် အသုံးဝင်သလို တစ်ချို့ကလည်း စီးပွားရေးအတွက် လိုအပ်ကြပါတယ် .. တစ်ချို့ကြတော့ မိမိချစ်သူ သူငယ်ချင်း တွေအတွက် အပျော် လုပ်ချင် ကြတာမျိုးလည်း ရှိကြပါတယ် .. ကျွန်တော် အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ စာအုပ်လေးကတော့ အခုနောက်ပိုင်း ထွက်လာတဲ့ Adoble Photoshop Cs5အသုံးပြုနည်းကို Tool တစ်ခုချင်း စီအလိုက် ရှင်းပြထားတဲ့ စာအုပ်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ် .. လိုအပ်တဲ့ သူတွေအတွက်တော့ အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ် .. ကျွန်တော် အောက်မှာ နှစ်နေရာ ခွဲပြီး တင်ပေးထားပါတယ် .. အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေသာ ဒေါင်းလော့ ချသွားလိုက်ပါ ..
Posted by kyaw bo bo lin at 3:02 AM
Kyaw Bo Lin (THIRTY-THREE)
အင်တာနက်သုံးသူများအတွက် မရှိမဖြစ် (IDM)
Filecloud l Mediafire l Munus
Learn English with me! British Council ရဲ့IELTS BE engineer တစ်ဦးရဲ့ IELTS Speaking ဘာသာပြန်တော့မယ်ဆိုလျှင်..(၁) လက်တွေ့အသုံးချ ရုံးသုံးအင်္ဂလိပ်စာ (အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာမှာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ စကားစုများ).. ဘယ်လိုဘာသာပြန်မလဲ (The Way To Translation)-အပိုင်း(၁) ဘယ်လိုဘာသာပြန်မလဲ (The Way To Translation)အပိုင်း-၂ ဘယ်လိုဘာသာပြန်မလဲ (The Way To Translation) အပိုင်း-၃
THIRTY-THREE ၇ဲ့ blog များ...
Blog များ... မြေပြိုခြင်း တက္ကစီဒရိုက်ဘာ သော့ တရားခံအစစ် ရောမရောက်၂၁ရာစုလူသား အဆိုးရွားဆုံးမြင်ကွင်း CD တို့ USB Drive တို့မှ Virus တွေကို ကွန်ပျူတာကို မကူးစေဖို့.. Online Security အတွက် သတိထားသင့်သောအချက်များ HTML Marquee HTML basic(တတိယ ပိုင်း) HTML basic(ဒုတိယ ပိုင်း) သင့် Website အတွက် ကောင်းနိုးရာရာ code များ.. ချစ်သူသို အသည်းကွဲ ပြဇာတ် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို တကယ်ချစ်ရင် ...76 ချက်ထဲက ဘယ်နှချက် သင်လုပ်နိုင်သလဲ ကွာရှင်းဟိုတယ် Facebook ကို Themes ပုံစံလန်းလန်းလေးသုံးချင်သူများအတွက် ကမ္ဘာကျော်ခဲ့သောအလွဲ များ ချစ်သူရေ အမျိုးသမီးတွေ သဘောကျတဲ့ ပုရိသရဲ့ အလေ့အထ... Website လိပ်စာ ကောင်းနိုး ရာရာများ... အမျိုးသားတွေသိဖို့ အမျိုးသမီးတွေအကြောင်း ( အပိုင်း ၁ ) Gmail Hack ချင်သူများအတွက် WIFI Password ခိုးနည်းလေး ပေးလိုက်ပါတယ် I am Buddhist hacking video နှင့် Ddos attack tools Password စာအမဲတုံးလေးတွေကို Text အနေနဲ့ ပြန်မြင်ရမယ့် Software DDos Attack Tools Page အတုတွေကို ပြန်ဖောက်မယ် အရင်လို... I'm sorry... ကိုယ့်နှလုံးသားကို ကိုယ်ဘယ်တော့မှ မလိမ်ပါနဲ့... HTML basic (Html ကို စ လေ့လာ သူများ အတွက်) (ပထမ ပိုင်း) Android phone များအတွက် Zawgyi Keyboard and Font ipot, iphone, ipad စတာတွေထဲကို သီချင်း၊ video၊ Games၊ softwares တွေ ဘယ်လိုထည့်ရမလဲ။ Thank you!...Barack-Obama တကယ်တော့ "အချစ်" မှာ "အချစ်" ပဲ လိုတာပါ ♥♥♥ ဒါပေမယ့် English - Myanmar , Myanmar - English အဘိဓာန်လေးပါ... Firefox မှာ Password တွေကို Java Code လေးနဲ့ ဖော်ကြည့်ပေးတဲ့ နည်းလေးပါ... I love ❤ Mom ❤ ငွေနဲ့ပြိုင်တဲ့လူ ကော်ဖီတွေရဲ့အဓိပ္ပါယ် ယခင် BURMA ယခု MYANMAR Hacking Windows and Linux Passwords in 10 Seconds အထွေထွေ ဗဟုသုတဘာသာ ဒါကို သူတို့မသိကြဘူး ဒါ အိပ်မက်တွေပဲဖြစ်ပါစေ Wi-Fi လွင့်နည်း Gmail ဟက်မခံရအောင် Back Up လုပ်ခြင်း gtalk တွင် photo slideshow လုပ်နည်း ကိုယ် Gmail Account ကို သူ များ ခိုး သုံး နေ သ လား ဆို တာ သိ ချင် ရင် ဖုန်းလိုင်းမှ Internet သုံးနေသူများ….. ဒါကိုသိပါသလားးးးးးးး??? weebly မှာ ဆိုဒ်တစ်ဖန်တီးမယ်နော်.......(free) နော် ကိုယ်ပိုင် Social Network တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ချင်လား??? Ning ဆိုက်တွေ Free သုံးရတုန်းကလို မျိုးရှိသေးလား??? အချစ်အက္ခရာ A to Z
E-book များ... Blog Spot မှာ Read More ထည့်တာလေး Bat File Programming စာအုပ် မြန်မာလို A+ ကွန်ပြူတာပြုပြင်နည်းစာအုပ်(မျိုးသူရ) Android Application ရေးသားဖန်တီးခြင်းဆိုင်ရာ Easy Computer Basics အခြေခံ ကွန်ပြူတာ စာအုပ် Adobe Photoshop for Webdesigner မြန်မာလို Social Engineering Hacking Book Twitter အသုံးပြုနည်း အင်တာနက်သုံး လိပ်စာများ Photoshop Cs5အသုံးပြုနည်း Building Free Websites မြန်မာလို Hacker လက်စွဲ ebook ကွန်ပြူတာမ၀ယ်ခင် ဖတ်ဖို့ စာအုပ် Web hacking CSS စာအုပ်မြန်မာလို Learning Web Design ( မြန်မာလို) PHP မြန်မာလို Ebook How To BecomeaHacker !! (မြန်မာလို) WIFI Hacking Basic (Myanmar Ebook) AutoCAD အတွက် စာအုပ်အားလုံး ( 2D / 3D / New Features ) Excel 2010 အသုံးပြုနည်း (မြန်မာလို) Linux OS အကြောင်းနှင့် အသုံးပြုပုံ (မြန်မာလို) ရိုးသားစွာထိုးထွင်းလေ့လာခြင်း(Honest hacking) Laptop ပြုပြင်နည်းနှင့်သိသင့်စရာများ(မြန်မာလို) Iphone jail break လုပ်နည်း Download လုပ်ရန် မသိမဖြစ်နည်း (မဖြစ်မနေဖတ်ရန်) ကိုယ်ပိုင် Blog လေးတစ်ခု ပြုလုပ်နည်း မြန်မာလို ဘာသာပြန်ပေးထားတဲ့ EBook လေးပါ... Computer တစ်လုံးဝယ်ရင် ဘာတွေလိုအပ်သလဲ? ဘာတွေ သိသင့်သလဲ?
ကဗျာများ... အသည်းကွဲကဗျာ... အလွမ်းကဗျာ ♥♥..မေ...တ္တာ...နေ...ခြည်....♥♥ မေ့နိုင်မယ့်တနေ မုန်းတတ်သွားပြီ “ အေးချမ်းတဲ့ကမ္ဘာဆီ ခေါ်သွားပေးပါမောင် “(ကောင်မလေးတွေ အတွက်ပေါ့) ❥ ငါမာနမကြီးတတ်ပါဘူး ... သူ့ကိုမေ့နိုင်ပြီလား... Loser I Love You
filecloud l mediafire l Sharebeast
ALL PROXY(13 June 2012)
မြန်မာပြည်တွင်းရှိ အင်တာနက်သုံးသူများအနေဖြင့် ၀င်ချင်သည့် ၀ဘ်ဆိုက်များ ၀င်မရခြင်း၊ gtalk ၀င်ရန် အရမ်းကြာနေခြင်းများ ဖြစ်ပါက proxy သုံးရန် လိုအပ်လာပါပြီ. အဲ့လို ခက်ခဲမှု့မျိုးမကြုံရအောင် 24 နာရီအတွင်း ပြုလုပ်ထားသည့် proxy server များကိုသာ daily update တင်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်...
ပြန်မရနိုင်တော့မှန်းသိရဲ့နဲ့ မင်းဆီကအချစ် မျှော်လင့်နေတုန်းပဲ… မမုန်းရက်နိုင်မှန်းသိရဲ့နဲ့ မင်းလမ်းခွဲဖို့တောင်းဆိုသေးတယ်.. ဘယ်ဆ...
AutoCAD အတွက် စာအုပ်အားလုံး ( 2D / 3D / New Features )
AutoCAD 2D ဆွဲနည်း ( Myanmar Version ) အခြေခံမှ အဆင့်မြင့် AutoCAD ပညာအထိ လေ့လာလိုသူများအတွက် အလွန်အသုံးဝင်သည့်ဤစာအုပ်လေးမှာ AutoCAD So...
ကွာရှင်းဟိုတယ်(from Nine Nine SaNay by နိုင်းနိုင်းစနေ)
စာရေးဆရာမနိုင်းနိုင်းစနေ ရဲ့ blog လေးပါ ဒီ blog လေးက တော်တော်ကောင်းလို့ share လိုက်ပါတယ် ကျွန်တော်ကတော့ ဒီ blog လေးကိုဖတ်ပြီး တော်ေ...
တစ်ယောက်ကိုတမ်းတနေမိတာ.. သူသိမှာလား.. အော်ခေါ်နေမိတာူသူကြားမှာလား.. သိပ်လွမ်းနေမိတာ သူဘာလုပ်နေမလဲ.. သေချာတာကတော့ သူ ကျွန်တော့်ကိ...
Website လိပ်စာ ကောင်းနိုး ရာရာများ.....
အကောင်းဆုံး ၀က်ဆိုက်များ from Administrator's blog GOOD WEBSITES http://www.dreamweaver-templates.net (Free တွေရနိုင်သလို… ၀ယ်လို့လည်...
ဆိုင်ကစက်တွေကနေ ကိုယ်ပိုင်စက် ကို Wireless ချိတ်ချင်တာ ပိုင်ရှင်က အလကား...
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို တကယ်ချစ်ရင်…76 ချက်ထဲက ဘယ်နှချက် သင် လုပ်နိုင်သလဲ
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို တကယ်ချစ်ရင်…76 ချက်ထဲက ဘယ်နှချက် သင် လုပ်နိုင်သလဲ (I copied it from GTU online Blog) - April Star |60- Hits| ...
PHP မြန်မာလို Ebook
PHP ကို လေ့လာနေသူများအတွက် အထူးပင်သင့်လျော်ပါသည်။ ဆရာမိုးမြင့်ရှိန်မှလှူဒါန်းပါသည်။ password တောင်းပါက wytumyanmar ဟု ရိုက် ပါ ...
WIFI Hacking Basic (Myanmar Ebook)
Wifi လိုင်းများ Hack နည်း (မြန်မာလို)စာအုပ်ပါ။စတင်လေ့လာသူတိုင်းအတွက်အထောက်အပံ့ကောင်းတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။ ဒီမှာ ဒေါင်းလုပ်ရန် ....
US Dollar 876.00
China Yuan 73.70
Singapore Dollar 683.00
Thai Baht 36.50
လ အလိုက် Post တင်နှုန်း...
WYTU (Breaking news)
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖတ်စာအုပ် မရသူများ မ၀ယ်နိုင်သူများအတွက်.. ၁၇ရက်နေ့ မှစ၍ အဆောင် 7/2-2 တွင် နှစ်အလိုက်မေဂျာအစုံ ဖတ်စာအုပ်များကို ငှားရမ်းဖတ်ရှူလေ့လာသင်ကြားနိုင်ပါသည်။ ဖတ်စာအုပ်များသီးသန့်Library ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ ဖတ်စာအုပ်ပေါင်း ၁၄၀၀၀(တစ်သောင်းလေးထောင်) ကျော်ရှိပါသည်။
External ကျောင်းသားများအနေဖြင့် ၁၄.၁၂.၂၀၁၂ နေ့နောက်ဆုံးထားပြီး ကျောင်းအပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။၄င်းနေ့ထက်နောက်ကျပါကလုံးဝ(လုံးဝ) ကျောင်းအပ်လက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။External ကျောင်းသားများမှာလဲ ကျောင်းမှာအခါအားလျော်စွာကျင်းပသောစာမေးပွဲအားလုံးကိုမပျက်မကွက် ဖြေဆိုသွားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းသားအားလုံးကျောင်းအပ်ရန်နောက်ဆုံးရက်မှာ 14.12.2012 နေ့(သောကြာ)နေ့ဖြစ်ပါသည်။
WYTU ကျောင်းသားများ၏အောင်စာရင်းကို Online တွင်နံနက် ၉နာရီ ၀န်းကျင်တွင် တင်ပေးနိုင်ရန် တာဝန်ရှိသူများနှင့် ညှိနှိုင်းထားပါသည် လောလောဆယ်ညှိနှိုင်းမှု အဆင်ပြေထားပါသည် ကျနော်တို့ အဖွဲ့ သားများမှာလဲ ညကတည်းက ဓါတ်ပုံရိုက်ရန်သွားစောင့်နေကြမည်ဖြစ်ပါသည် ။ထို့ကြောင့် ကျောင်းသားများ အနေဖြင့် ကျောင်းသို့သွားစရာမလိုပဲမိမိတိုအိမ်မှပင်အောင်စာရင်းကြည့်ရှု နိင်တော့မည်ဖြစ်ပါသည်။အောင်စာရင်းများကို WYTU Official Page များ ၊ Group များ၊နှင့် www.wytumyanmar.com တို့တွင်တင်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည် (အများကြီးလာကြည့်လို့လူတအားကျပ်ရင်အဆင်မပြေနိုင်ပါ ထို့ကြောင့်အိမ် မှာအေးဆေးနေကြပါ ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးမယ်)
ကျောင်းကတော့ အောင်စာရင်းထွက်သွားပြီ ကျတဲ့သူတွေလဲ များလိုက်တာ major တစ်ခုကို အယောက် (၃၀၀) ၀န်းကျင်လောက်ပဲအောင်ကြတယ်...၃ရက်နေ့ ကျောင်းစဖွင့်ပါမည်။
ပထမနှစ်တက်မယ့်လူတွေဒါလေးတွေယူသွားပေးဖို့ပြောပေးပါ။ - မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ (မိဘ၊ကျောင်းသား) - ၁၀တန်းအောင်လက်မှတ်မိတ...္တူ - ဓာတ်ပုံ 12 ပုံ (ကျား - ကော်လံပါအကီင်္ျ၊ ဆံပင်အတို၊ နားပေါ်ရမည်၊ ဆံပင်ဆေးဆိုးလက်မခံ၊ နားကပ်မပန်ရ၊ မ-မြန်မာအကျီင်္၊ ဆံပင်နားနောက်ပို့ထားရန်၊ အရှေ့မချထားရ၊ PS တီရှပ်လုံဝမရပါ) - ရက်ကွပ်၊ ရဲစခန်း၊ မြို့နယ် ထောက်ခံစာ -ဆေးရုံထောက်ခံစာ - မှတ်ပုံတင်များမရှိခဲ့လျှင် ပျောက်ဆုံး၊ သေဆုံး ဘာညာပေါ့ ရက်ကွပ်ကနေ ထောက်ခံစာပါယူလာပါ။ ဒီလောက်ဆို အဆင်ပြေပါပြီ ။ မဟုတ်ရင် ခဏခဏ အိမ်ပြန်ယူနေရအုန်းမယ်။ (Via- TU Online friends)